Sidaas aad hadda heysato mid ka mid ah qalabka geeyo ugu caansan suuqa ee - Roku ah. Waa hagaag, ha kaliya aad u isticmaasho sanduuqa madow cusub dhaldhalaalaan inay sii qulquli Netflix? Waa hagaag, waxay u badan oo dhan in ka badan samayn karo. Halkan waxaa ku qoran 10 talooyin anfacaya iyo trick in turbocharge aad Roku waayo-aragnimo madadaalo.
Play content ka network deegaanka
Ma doonaysaa in ay ku raaxaystaan ​​filimada gurigaaga ama content soo bixi on your Roku? Wondershare Video Converter caawin kartaa. Just download iyo gashato aad kombuutarka iyo abuurtaan plugin Server Warbaahinta. Ma aha oo kaliya qabtaan shaqo aad u weyn hoorto oo dhan warbaahinta maxaliga ah, laakiin sidoo kale aad u saamaxaaya in ay helaan maktabadda content aad Roku. Waxa kale oo aad xitaa maamuli kartaa ururinta iyo ku dar wararka cover aad file video.
Daawo YouTube videos
Haddii aad iska leh aad Roku ka hor December ee 2013, oo aad ka ogaan doonto in, halkaas ma YouTube codsi rasmi ah oo ku saabsan Channel Store wada qaatay; oo xitaa hadda, app waxaa laga heli karaa oo keliya Roku 3 ee Kanada, Maraykanka, UK, iyo Republic of Ireland, taas oo ka yar tahay haboon. Laakiin weli waxaad ka daawan kartaa YouTube videos la codsiyada kale. Mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan waa MyVideoBuzz , iyo waxa kale oo aad sii qulquli karaan YouTube in aad Roku ka ah macruufka ama Android qalabka la isticmaalayo Twonky Ray.
Isticmaal qalabka aad mobile sida fog ah
The fog fog si joogto ah Roku ma ku haboon tahay in la isticmaalo? Ha welwelin! Iyadoo app Roku ah, waxaad si fudud u samayn kartaa Android ama macruufka qalab xarunta awood Roku gacanta. Marka lagu rakibay, waxaad si fudud u isticmaali kartaa, ku dar, iyo channels heerka, qoraalka galaan isticmaalaya keyboard qalab, ama content il ka qalab mobile. Qayb kale oo weyn waa in, app u shaqeeyo qarnigan oo dhan ciyaartoyda Roku.
Add channels gaarka loo leeyahay
Ka sokow channels dadweynaha ku qoran gudahooda Channel Roku ka Store, waxaa kale oo jira qaar ka mid ah channels gaarka loo leeyahay kuwaas oo si fudud aan ku soo rasmi ah ansixiyo Roku. Laakiin si fudud iyaga waxaad ku dari kartaa in aad qalab Roku. Just gasho goobta Roku iyo waxay helaan "Add a Channel Private" link. Markaas geli furaha helitaanka iyo kanaalka doonaa si degdeg ah lagu daro qalab aad. Waxaad fiirin kartaa Streamfree.tv iyo RokuGuide.com si aad u hesho qaar ka mid ah doorashada weyn. Laakiin xasuuso in kuwan channels gaarka loo leeyahay ee aan si rasmi ah oo ay taageerayaan ku Roku, sidaas qaab buggy dhici kara inta lagu guda jiro loo maqli ah.
Ballaariyo awoodda kaydinta channel kaarka SD micro
Haddii ay maamulaan ka mid ah qolka lagu kaydiyo channels aad Roku, aad si fudud u fidin karaan awoodda kaydinta by galay booska ku jira xaggiisa dambe oo cutubkan galinta kaarka SD micro. Fadlan la soco in booska aan la isticmaali karaa in uu kaydiyo faylasha video ama waxyaalaha kale. Marka kaarka la geliyo, kaarka flash si toos ah la formatted doonaa. Haddii kaarka waa lagaa saarayaa, sabab kasta, oo dhan barnaamijyadooda u yeelan doonaan in ay lagu rakibi mar mar dib geliyo.
Abaabulaan channels aad screen guriga
Ka helay wax badan oo ka mid ah kanaalada aad screen guriga ugu weyn oo aad rabto inaad iyaga abaabulaan? Dhab ahaantii, si fudud iyaga oo aad u socon kartaa iyo iyaga group wada. Si aad u samayn, kaliya dooro channel aad rabto in aad u guurto, ka dibna riix furaha Xulashada aad u fog Roku (waa * muhiim ah calaamad ah). Markaas submenu ah arbushin doonaa, oo aad ka dooran kartaa Change Channel Wacan. Icon channel ayaa lagu iftiimiyay doonaa, si aad u rogto karaa meesha aad rabto in aad u guurto, iyo OK jaraa'id.
Beddel heerka geeyo xoogaa ah
Mid ka mid ah habka ay u xaliyaan arrimaha iibiyo la content qeexitaanka sare waa in la isticmaalo Roku sameeysa menu. Laakiin haddii aadan raaxo isticmaalaya bedeley farsamo, aad si fiican ha isku dayi lahaa oo aan ka soo habkan.
Si aad u hesho this menu, hubi in aad isku xigxiga bilowdo ka screen guriga. Markaas riix badhanka Home shanta jeer, dib u socon button saddex jeer oo button Forward Fast laba jeer, iyadoo kala bar labaad u dhexeeya jaraa'id button kasta. Halkan waxaad ka dooran kartaa heerka ugu yar yara inuu u ciyaaro video.
Isticmaal PIN ah si ay u ilaaliyaan iibsadaan aan la ogalayn
Roku uu awood u leeyahay in la xaddido falalka gaar ah oo isticmaalaya lambar sir ah afarta lambar PIN. By isticmaalaya PIN this, waxaad ka baxsan kartaa ay iibsadaan aan la ogalayn. Waxa kale oo la codsan karaa marka isku dayayaan in ay channels ama kulan ku dari ka Roku, inta aad weli ku dari kartaa channels dadweynaha iyo kuwa gaarka ah iyada oo aan PIN nambarka.
Ka beddelaan theme in mid ka mid ah featured Jooji Roku
Play kulan ku Roku3
Iyada oo ay gacanta ku cusub updated fog fog, hadda waxaad isticmaali kartaa waji inuu u ciyaaro ciyaaraha sida Shimbiraha careysan (kaas oo ka mid ahaa for free) la Roku 3. fog la xidhiidhaa la WiFi, taas oo macnaheedu yahay aadan u baahnayn line-of-indhaha ciyaaryahanka , oo sidoo kale la Timaadda fullaaci kara, suunka ah curcurka hagaajin karo.
> Resource > Video > 10 Talooyin iyo tabaha ka faaidaysiga ee Roku